Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : nyohabolanamalagasy
Entry Ny Ohabolana Malagasy
Publisher 1988. Ambozontany. Ambozontany, Fianarantsoa. 1988..
Dimensions Width: 14cm. Height: 19cm. Pages: 175.
Sava ranon' ando
Tsy ho fanangonana na fitanisana toa ireo boky taloha rehetra ity. Fa ho fisavasavana sy ho fikarohana kosa.
Hovisavisaina etsy aoriana ireo boky samy hafa efa nivoaka momba ny Ohabolana, izay fantatra ahay: ao ny nataon' ny havana avy any am-pita (misionera englisy sy norveziana sy frantsay), ao ny nataon' ny teratany tary alohaloha sy taty aoriandriana. Misaotra azy ireny, nanangona sy nitahiry ny vako-drazana. Anisan' ny sarobidy amin' ny vako-drazana ny ohabolan' ny isam-pirenena, fa mba iraketany ny fisaina amam-pomban-drazany: indrindra amin' ny Malagasy, izay tsy mbola nanan-tsoratra niraketany ny vako-drazany raha tsy hatramin' ny nanjakan' Ilaidama (1810-1828).
Izay mameno ny fo aman-tsaina moa no famoaky ny vava: koa inona ny Ohabolana, raha tsy ny ohatrohatra fampiasan' ny vahoaka, avy amin' izay hitany sy iainany isan' andro vaky izao? Dia miboraka ho azy eo tokoa, na niniany na tsy niniany.
Izany no iantsoana ny ohabolan' ny isam-pirenena ho " fahendren' ny taranaka " . Tsy dia hoe fahendrena avokoa no atoron' ny Ohabolana - na ny an' ny firenena iza na ny an' ny firenena iza - fa voaraikitra ao ny fahita eo amin' ny fiainana na tsara na ratsy; voaraikitra ao anefa ny fahitany rehetra, ahatsapana izay mba fahaizany mandinika.
Raha io fahaiza-mandinika io, dia samy manana ny azy ihany ny isam-pirenena: ny Razantsika koa, mba toa ny hafa. Tsy dia nisy taiza tsy akory: samy mandia tany ary samy miloloha lanitra, na ny avy atsy na ny avy aroa. Koa saika mitovy ihany ny fahita sy ny fiaina voaraikitra ao amin' ny ohabolam-pirenena ambany masoandro. Fa "ladim-boatavo ny olombelona, ka raha fotorana iray ihany" ; ary afandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva" .
Anefa koa "toa ny embok'akondro: ka raha manondro lanitra iray ihany, fa raha miondrika samy manana ho lafiny" . Afa-tsy ny endrika samy hafa tefy, eo dia eo koa ny fandinika samy hafa firaika. Mba manana ny azy ny Malagasy, araka izay asehon' ny ohabolany.
Izay angaha no hosavasavaina. Andrana ihany izy ity: toa sava ranon' ando angaha ny anay zokinjokiny. Fa tandindomin' ny somambisamby, ka dodona sao tratry ny haizina...
Misoritra ho fizarana efatra ny resaka.
Amin' ny fizarana voalohany, dia hosavasavaintsika ny voadiniky ny Razana. Tsy dia misy zava-baovao hambara tsy akory amin' io. Amin' ireo boky hovisavisaintsika etsy aoriana, dia efa nisy nandahatra ny ohabolana malagasy araka ny foto-kevitra. Nefa mba fandaharana vaovao ihany no aroso, hahazava ny fisavasavana manaraka.
Amin' ny fizarana faharoa, dia hovoasantsika ny fandiniky ny Razana. Miditra amin' ny votoatin-dresaka isika amin' izay. Eo no mampiavaka ny ohabolana malagasy sy ny toe-tsain' ny Malagasy. Misy manko fomba tena lalain' ny Malagasy, nefa manavia an' ireo havantsika avy any am-pita. Moa tsy misy koa tena lalain' izy ireo, nefa manavia antsika Malagasy?
Amin' ny fizarana fahatelo, hosavasavaintsika ny hasin' ny ohabolana sy ny firafitry ny ohabolana. Tsy ravaky ny teny foana mantsy ny ohabolana, araka ny fihevitry ny marivo salosina sy araka ny fampiasan' ny sasany azy be fahatany, fa mizaka hery miafina mahavariana co amin' ny fitenenana. Ary samy hafa ny fandrafetan' ny Razana ny ohatrohatra fanaony, koa samy hafa araka izany koa ny fipaikan' ny ohabolana amin' ny eritreritr' izay itenenana.
Ary farany, amin' ny fizarana fahaefatra dia hosavasa-vaintsika ny onja mitondra ny fandiniky ny Razana ao amin' ny ohabolany. Mifanerana amin' ny fiainana manontoio ny hevitra fonosin' ny ohabolana: nony savasavaina anefa, tsapa misy onja manentana azy rehetra. Mety ho samy hafa izany amin' ny mpandinika samy hafa: izay mavesa-danja amin' ny mpanoratra no alahany.
Ireto àry ny boky mirakitra ny Ohabolana voaàngona hatramin' izao, ka nifotorana amin' ity fisavasavana tsotsotra ity:
Ny ohabolan' ny Ntaolo : nangonin' i W. Cousins sy Parrett ary navoakany tamin' ny taona 1885. Misy ohabolana 3.818 ao, voalohatra araka ny abidia fotsiny ary tsy misy dikan-teny.
Ohabolana ou proverbes malgaches : ireo ohabolana efa voaangon' i Cousins sy Parrett ireo kosa no nadikan' i Houlder sy ny namany amin' ny teny englisy sy teny frantsay, dia natsitokotokony araka ny foto-kevitra, ary nosisihany fivoasana kely aza ny sasany. Misy ohabolana 2.318. Miampy ohabolana Betsimisaraka 100, tsy mba voadika amin' ny teny vazaha fa voavadika amin' ny fiteny Merina. Amin' ny faran' ny boky, mbola misy fanoroana ny zava-drehetra voateny ao amin' ireo ohabolana ireo, ka voamarika ao ny laharan' ny ohabolana rehetra miteny izany. Tamin' ny taona 1894 no nanomboka nivoaka tsikelikely ity boky ity. Mahagaga fa tsy mbola nisy nitsara ny dikan-teny diso -sy ny hevi-teny diso amin' ity boky ity hatrizay nanontana azy imbetsaka izay.
Ao amin' ny Anganon' ny Ntaolo navoakan' i Dahle niarakaraka tamin' izany, dia ahitana ohabolana 333, hafa noho ireo voaangon-dry Cousins sy ny namany, voalahatra araka ny abidia fotsiny.
Le livre de la sagesse malgache , nanangonan' i de Veyrières ohabolana 6.533, tokony ho tamin' ny taona 1910-1913. Natokotokony araka ny fariparitry ny fiainana manontolo, nasiany dikan-teny frantsay sy fivoasana kely. Rakitra miavosa indrindra: saingy haingan-doatra ny nipetrahan' ilay olona taty, ka tsy voadinika ary tsy voahitsy araka ny mety.
Choix de proverbes malgaches , nifantenan' i H. Nicol ohabolana fampiasa mazana indrindra, natokony araka ny foto-kevitra sasany, misy dikanteny frantsay. Nivoaka tokony ho tamin' ny taona 1930 teo.
Tao amin' ny Imerinalavasofina nivoaka teo an-taona 1930 teo ihany koa, no nampitahan-dRazafintsalama Josefa ny ohabolana malagasy amin' ny ohabolana hebrio: be tokoa ny itovizany na amin' ny heviny na amin' ny fipaikany.
Taoriana kelin' io no namoahan-dRasamuel Maurice ny Fitenin-drazana : misy ohabolana maro ao, tranainy sy vaovao, fa ny ohabolana tokoa moa no ain-dehiben' ny fitenin-drazana.
Ohabolana vaovao : navoakan-dRatsimbazafy Louis tamin' ny taona 1948. Misy 2.300 no tafavoakany, milahatra araka ny abidia; saingy vita ny M, dia tsy nitohy intsony... Be ohabolana mbola tsy navoakan' ny teo aloha ny azy: fa ain' ny fiteny tokoa ny ohabolana, ka samy mamorona vaovao lava ny taranaka mifandimby.
Ohabolana sy fomba fiteny , navoakan' i Léonard Ramaroson tamin' ny taona 1958. Boky roa no tafavoaka. Tsy voaisa ny ohabolana zavon-tany ao. Ny mahahafa kely azy ity, dia ny fandaharana ny ohaholana araka ny fihetsi-panahy malagasy (firaisan-kina, fifankatiavana, havana sy mpianakavy...) ary mbola voatsikera amin' ny lafiny sy andinidiny indray.
Ohabolana Betsimisaraka , navoakan' i Samson Robert efa elaela ihany (tsy voalaza ao amin' ny boky ny taona). Ohabolana 420 no ao, voalahatra araka ny abidia (niafara teo amin' ny S): misy fivoasana ny teny sy ny hevitra mety tsy ho azo.
Ohabolana Betsimisaraka , navoakan' i Joël Laimijay tamin' ny taona 1961. Misy 1.145, voalahatra araka ny foto-kevitra manaraka abidia (ady, ahiahy, anatra, Andriamanitra...). Misy fivoasana ny teny sy ny hevitra mety tsy ho azo.
Ohabolana malagasy , nohazay ain' ny Onja (Andriamboavonjy Benjamin Ranaivo) tao amin' ny fampielezam-peo, ary navoakany am-boky nanomboka tamin' ny taona 1960. Tsy voaisa ny ohabolana avy amin' ny foko rehetra voatsiahy ao, fa mahavariana kosa ny fivoasan' ny Onja azy araka ny tantara amam-pomba mety ho takatra.
Ao amin' ny Boky III nanangonan-dRainihifina ny Lovantsaina Betsileo , nivoaka tamin' ny taona 1961, dia misy ohabolana 2.002 voalahatra araka ny abidia: voazava ny teny mety tsy ho azo.
Ohabolana Tantsiraka , navoakan' i Philippe Rakotoson tamin' ny taona 1962. Misy ohabolana Antandroy 111, ohabolana Antanosy 198, ohabolana Bara 20, ohabolana Mahafaly 64, ohabolana Sakalava 36, ohabolana Tsimihety 358, ohabolana Antaisaka 16. Voalahatra araka ny abidia ny ohabolana isam-poko, voazava ny teny aman-kevitra mety tsy ho azo. Ary amin' ny fizahan-takila, dia voatoro ny ohabolana isam-poko mifandray hevitra. Ankoatran' izany, dia mbola voatsimpona indray ny teny tsirairay hita amin' ireo ohabolana rehetra ao ka voatondro ny takila sy ny ohabolana misy azy.
Ohabolana voalamina , navoakan-dRatatamo tamin' ny taona 1964, hoe hanampiana ny manala fanadinana. Tsy voaisa ny ohabolana ao, vitsy ihany. Voalamina araka ny foto-kevitra.